Company - Beijing Holtop Hawada Co., Ltd.
Holtop ayaa la aasaasay xiriirka ganacsiga dalalka waaweyn ee Asia, Europe iyo North America, iyo kasbadeen sumcad dunida oo dhan ka ah bixinta alaabta lagu kalsoonaan karo, khibrad codsiga aqoon iyo taageero waxqabad iyo adeegyada.
Holtop had iyo jeer heegan u noqdaan howlgalka of bixinta waxyaabaha naftu aad u waxtar fiican iyo tamarta iyo xalalka si loo yareeyo wasakhaynta deegaanka, si ay u hubiyaan caafimaadka dadka iyo dhulka ilaaliyo.
waa soo saaraha ugu horeeysa ee Shiinaha ku takhasustay soo saarka ee hawada in qalabkii kabashada kulaylka hawada. Aasaasay sannadkii 2002, waxa uu ka go'an in horumarinta cilmi-baarista iyo technology ee berrinkii hawo kabashada kulaylka iyo tamar kaydsiga qalab maaraysay hawada in ka badan 16 sano.
Iyada oo sano hal-abuurka iyo horumarinta, Holtop siin kartaa kala duwan oo ay ka buuxaan waxyaabaha, ilaa 20 taxane iyo 200 sooca ah. kala duwan oo soo saarka The inta badan ku aaddan tahay: Heat Recovery mishiinada neefsashada, Energy Recovery mishiinada neefsashada, Fresh Air Safayn Systems, Rotary Heat Exchangers (giraangiraha Heat Wheels iyo Enthalpy), saxan Heat Exchangers, Units Qabashada Air, iwm
Holtop xaqiijinaya alaabta tayo sare leh oo R xirfadeed & D kooxda, goobaha wax soo saarka fasalka-koowaad iyo nidaamka maamulka sare. Holtop leh mashiinada gacanta tireedyada, shaybaar enthalpy ansixiyey qaranka, waxaana uu si guul ah ku soo maray caddeyn ah ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE iyo EUROVENT. Ka sokow, Holtop saldhig saarka ayaa la ansixiyey ee kaalinta by TUV Sud.
Holtop ayaa 400 shaqaalaha iyo daboolayaa meel ka mid ah in ka badan 30,000 oo mitir oo laba jibbaaran. awoodda wax soo saarka Annual qalabka kabashada kulaylka gaadho 100,000 qaybood. Holtop siisa waxyaabaha OEM for Midea, LG, Hitachi, McQuay, York, Trane iyo Carrier. Sida sharaf, Holtop ahaa qeybiyaha usoo Beijing Olympics 2008 iyo Shanghai World hadalkay 2010.